Umfundi omncinane weZibonelelo
I-Visual Learning ngenye yeendlela ezintathu zokufunda ezahlukileyo ezenziwe udumo nguNeil D. Fleming kwi-VAK yokufundisa. Uthi abantu abonwabayo abafundi kufuneka babone ulwazi olutsha ukuze bafunde ngokuqinisekileyo, ngoko ke imfuno yezifundo zokufunda zabafundi abazibonayo. Abantu abanolu hlobo baninzi baqonda kwaye bayaphendula ngezinto ezifana nombala, ithoni, ukukhanya, ukuhlukana kunye nolunye ulwazi olubonakalayo xa befunda, bafunda kwaye bafunde.
Abanye banokwesikhumbuzo sezithombe kwididi ezahlukahlukeneyo kwaye abanakukwazi ukubona ngolu hlobo ulwazi emva kokulufunda okanye ukulubona, kodwa luyakwenza kwakhona.
Uninzi lwabantu basebenzisa le ndlela yokufunda ubuncinci kwiindawo zabo zobomi, ingakumbi kuba izikolo zesikolo zijoliswe kubafundi ababonayo, kodwa abanye abantu baya kuzibeka njengabafundi ababonakalayo apho abanye bengenako.
Ukuba ungomnye wabo, kwaye unokufumana apha ukuba unemibuzo elula, imibuzo eyishumi, unokufumana ezi zinto zinceda xa ufunda uvavanyo, imibuzo, phakathi komzuzu okanye uvavanyo lokugqibela.
Iingcebiso zokuFunda zabafundi abazibonayo
Ekubeni amehlo ayibalulekileyo, abafundi ababonayo badinga izinto phambi kwabo ukuze bancede bafumane ulwazi olupheleleyo kwimemori. Nazi ezinye iindlela onokuzibeka ngayo kule ndlela yokufunda yakho.
1. Umbala weKhowudi
Nika imibala kwiindatshana eziqhelekileyo kumanqaku akho, incwadi yesifundo kunye nokunikezelwa. Ngokomzekelo, ukuba ufunda amagama esizwi sovavanyo, gxi ninisa zonke izibizo eziphuzi, zonke izenzi eziluhlaza kunye nazo zonke izichazi zepinki.
Uya kudibana nombala othile kunye nenxalenye yentetho, eya kukunceda uyikhumbule ekuhlolweni.
Kwincwadi yeembali, qinisa zonke izenzo ezinzulu zomntu othile, umzekelo, ngombala omnye kunye nemiphumo yezenzo zakhe kwelinye. Xa uphando malunga nesicatshulwa, ikhowudi yombala ulwazi olufumana ngesihloko.
Ingqondo yakho iyayikhumbula imbala kakuhle, ngoko-ke ukuyisebenzise inzuzo yakho!
2. Hlela amanqaku akho
Ngenxa yokuba ubonakala ngokubonakalayo, amanqaku angenakulungiswa aya kuba nzima kakhulu kuwe. Beka zonke izibonelelo zakho kwindawo enye kwincwadi yakho okanye inqobo. Yenza iifayile ezicacileyo, ezifanelekileyo okanye olunye uhlobo lwenkqubo ukugcina izinto zichanekileyo. Phinda ubhale amanqaku akho. Sebenzisa iziqulatho ukugcina izinto zichanekile kwaye zicacise. Awuyi kubheka kuphela iimbono ezivela kwintetho kwakhona eyayibeka phambili ekufundeni okubonakalayo, unokongeza ulwazi olutsha okanye uhlele njengoko uhamba ngokuya kukunceda ufunde okokufunda. Nathi
3. Funda i-Graphics
Le ngongoma yokufundela inomdla kubo abo banokufumana ulwazi olutsha ngamehlo akho. Sebenzisa iitshathi kunye nemifanekiso kwiincwadi zakho zokufunda kwisicatshulwa sakho kwesahluko. Kulula kakhulu ukufunda itafile yenkcazelo yezinto ezikwitshathi kunokuba ufunde uluhlu lwezinto. Ibhonasi? Amashadi anemibala ekhowudiweyo!
4. Dweba imifanekiso okanye amanani
Nangona awuyena mntu udala kakhulu, phuma ipensela uze udwebe imifanekiso, amanani, kunye nemifanekiso ukuze uhambisane nolwazi ozama ukulufunda. Ibinzana elithi, "Umfanekiso ufanele amazwi angamawaka" ngokuqinisekileyo usebenza kuwe.
Ingqondo yakho iya kugcina imifanekiso yemizobo emihlanu emikhulu eCanada ekhanda lakho ixesha elide kunokuba lube luhlu lwazo zixeko. Zincede xa iincwadi zezifundo zingenzi kwaye zenze iziboniso zakho.
5. Qaphela amaDokhumenti okanye iiVideos kwiSifundo sakho
Ungesabi ukunyuka ngaphandle kweklasi lakho ukuze uqoqe ulwazi malunga nantoni na oyifunayo nje kuphela xa usebenzisa umthombo onokwethenjelwa kwaye awuyikunyaniseka kwi-YouTube. Ukufumana umfanekiso obanzi, umfanekiso omkhulu wesihloko sakho unokwandisa ulwazi lwakho! Yaye xa unolu hlobo lomfundi, lunceda ukukhusela olo lwazi ngokusebenzisa amajelo afana namaxwebhu okanye amavidiyo kunokuba nje ngeencwadi zezifundo.
6. Dweba Iimpawu zeMaphu
Imephu yombono yindlela yokujonga ngokucacileyo, apho ufumana zonke iingcamango ezisuka ekhanda lakho kwiphepha uze udibanise apho ubona khona.
Uza kuqala ngcamango ephambili-masithi "imozulu" ngenxa yomzekeliso. Oku kuya kuhamba phakathi kwiphepha lakho lephepha. Emva koko, ukusuka kwimozulu, uya kufaka kwiindidi eziphambili. Izinto ezifana nesiphango, isimo sezulu, umoya, amafu, njl Amafu anokwahlukana ngokubanzi ukuya kwi-cumulus, stratus, cirrus, njl njl. Kunye nemvula yamanzi iyahlukana ibe yimvula, i-snowet, ikhephu, njl. Ukuba ukhangela isihloko ofundayo kule nkalo, kulula ukubona izikhala okubelelwe elwazini. Ukuba, ngokomzekelo, ufunda isimo sezulu kwaye uyaqonda ukuba awukwazi ukuba iimozulu ingathintela njani imozulu okanye yintoni ongayifaka phantsi kwesi sigaba, mhlawumbi ulahlekelwe into ethile eklasini.
Imfazwe ephezulu yeThermopylae (kunye neArtemisum) Iincwadi
I-Schuyler Sisters kunye nendima yabo kwi-Revolution yaseMerika
Imfazwe Yehlabathi II: iMfazwe yaseGuadalcanal
Hlola iColestial Triangle
Ulawulo oluphezulu lweeofisi zamaRoma kwiCursus Honorum
Xa usebenzisa iPalate, iPalette, kunye nePallet
Uqoqo lweShakespeare IziCwangciso zezifundo
Umbutho WezeMpilo Wehlabathi
Indlela yokudweba i-Superhero yeSetyhini
I-Microwave Astronomy Inceda i-Astronomers Hlola i-Cosmos
Oko Kumele Ukwazi (kwaye akufuneki Ukwazi) Ngokumalunga neenqanawa zeGolf
Uluphi Ulawulo LukaThixo?
I-Vanes yeMimoya kunye ne-Wind Socks: I-Decor kunye NoMninzi kakhulu
Izinto ezili-10 ezixhalabisa abaTitshala beMatriki kakhulu
Ukuhlaziywa kwe-albhamu: Alan Jackson - Iikhumbuzo ezixabisekileyo
Isingeniso kwisithintelo seBhajethi